Osimiri Osimiri - Ngwọta niile akwụkwọ ozi sitere na AZ online
Kedu ihe bụ isi e nyere na City Land River?
Ụkpụrụ na ngwọta maka osimiri obodo
Iwu obodo Land Land rules dị mfe na ngwa ngwa ịkọwa: iji nwee ike igwu obodo, ala, mmiri ị chọrọ 2 ma ọ bụ karịa egwuregwu. Onye ọ bụla ọkpụkpọ chọrọ akwụkwọ mpempe akwụkwọ nke DINA-4 akwụkwọ na pen.
Obodo obodo iwu osimiri nke egwuregwu
N'elu mpempe akwụkwọ, ndị egwuregwu na-eme tebụl. A na-ede ederede n'elu tebụl.
Ọ na-amalite site na obodo, ala, osimiri na isiokwu ndị ọzọ dị ka osisi, ọrụ, anụmanụ ma ọ bụ ọbụna isiokwu ndị ọzọ dịka nri, ihe ọṅụṅụ, ụgbọ ala, aha ama, ngwá ọrụ ma ọ bụ ejiji. A ghaghị ịtụle isiokwu ndị a tupu oge ndị ọzọ na egwuregwu ndị ọzọ.
Onye na-egwu egwu na-ekwu na mkpụrụedemede si A ruo Z na onye ọkpụkpọ ọzọ ga-asị "Kwụsị" n'oge ụfọdụ. Ugbu a, ndị egwuregwu niile ga-achọta okwu nke ụdị ahụ kwekọrọ na leta ahụ ahọrọla. Na mgbakwunye na obodo ahụ, ala na osimiri, isiokwu ndị a ma ama bụ anụ ọhịa, osisi, aha na ọrụ.
N'okpuru ala a, anyị na-enye ngwọta ngwọta maka ebe ndị ọzọ dị egwu dị ka ngwá egwú ma ọ bụ cocktails.
Bụ onye mbụ jupụtara mpempe akwụkwọ kpamkpam na-ekwu "na-akwụsị" na niile ọzọ egwuregwu ga-ozugbo osụhọde ya pen. Ugbu a, onye mbụ malitere ịgụ nke mbụ. A na-ekesa isi okwu maka okwu ndị a.
Ọ bụrụ na ọtụtụ mmadụ nwere otu okwu ahụ, mgbe ọ bụla 5 na-enweta ihe, ọ bụrụ na mmadụ nwere okwu, ọ na-enweta ihe 10. Otú ọ dị, ọ bụrụ na mmadụ nwere okwu naanị ya n'otu ụdị, 25 na-enweta ihe. Ya mere onye ọ bụla na-agbaso otu ụkpụrụ ahụ. A na-agbakwunye ihe ndị ahụ mgbe ọ bụla na njedebe onye nwere ihe kachasị ya bụ onye mmeri.
Ntughari site na omume: Egwuru egwu na-eme mgbe ụfọdụ n'etiti ndị egwu mgbe ndị na-edebanye aha ha n'otu n'otu, iji mee ngwa ngwa, dee okwu ndị a na-apụghị ịgụta ọnụ na mgbochi ha. Ebe ọ bụ na ị nwere ike ikwenye dịka obodo iwu obodo na ndị ọzọ ga-enwe ike ịgụ usoro iji nweta ngwọta dị irè.
Ụkpụrụ na ibudata ma bipụta maka egwuregwu ọzọ gị gburugburu
Obodo obodo nke na-aghọ aghụghọ n'omume mmiri
City Land River Cheater ọzọ agbakwunyere
Obodo obodo osimiri ngwọta ụdị ejiji